Tababare Frank Oo Cayaartoydiisa Ka Dalbaday In Ay Shaqdiisa Badbaadiyaan |
Frank Lampard ayaa ciyaartoyda Chelsea siiyey digniintii ugu dambaysay, waxaanu u sheegay in ay kaliya u bannaan tahay laba waddo oo ah inay isaga garabkiisa istaagaan oo ay ka badbaadiyaan in shaqada laga caydhiyo ama ay kasoo horjeedsadaan, laakiin aanay jirin meel dhexe oo la istaago.
Tababare Lampard ayaa doonaya in ciyaartoyda kooxdu ay isku duubni muujiyaan waqtigan adag, si ay guulo u keeni karaan.
Chelsea ayaa caawa la ciyaaraysa kooxda yeerka afraad ee Morecambe waxaana guul ay keento ay ugu gdubi doontaa wareegga afraad ee tartanka FA Cup.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ayay Chelsea hal mar oo kaliya guul keentay, waxaana madax-xanuun ah in lixdaas ciyaarood laga badiyey afar ka mid ah.
Tababare Frank Lampard ayaa ciyaartoyda kooxdiisa digniin u diray ka hor kulanka Morecambe, waxaana uu u sheegay inay isaga la jiraan amaba ay kasoo horjeedsadaan.
Isaga oo warbaahinta la hadlayay ayuu yidhi: “Ciyaartoyda aan ciyaarin ma faraxsanaanayaan. Ujeeddadu maaha inaan anigu tartan la gelayo shaqsiyan, laakiin waa inaan dhamaantood weydiisanayo inay si fiican u tababartaan, inay taageeraan ciyaartoydooda iyo inay maalin kasta yeeshaan aragti wanaagsan.”
Ciyaartoyda qaarkood ayuu digniin u diray, waxaanu yidhi: “Haddii ay jiraan ciyaartooyo aan sidaas samaynayn, kaddib go’aan ayaa la gaadhi doonaa. Haddii ay jiraan fursadana waxa loo ogolaan doonaa inay sida ugu habboon ku baxaan, sida u wanaagsan kooxda iyo anigaba, taas ayaa dhici karta.”
Chelsea la filayaa in bishan January ay ka tagaan ciyaartooyo ay ka mid yihiin Marcos Alonso, Kepa Arrizabalga iyo Antonio Rudiguer.
Ka hor kulanka Morecambe, waxa uu Frank Lampard u yeedhay ciyaartoyda da’da yar ee Henry Lawrence, Lewis Bate, Jude Soonsup-Bell iyo Tino Livramento oo la filayo inay dheelaan kulankan.
Waxa kale oo ciyaartan aan joogin oo dhaaac kaga maqan Andreas Christensen, Reece James iyo N’Golo Kante.